War saxfadeed: Booqashada Madaxweynaha Puntland ku joogo Mareykanka. [Akhris …] – Radio Daljir
War saxfadeed: Booqashada Madaxweynaha Puntland ku joogo Mareykanka. [Akhris …]
Washington, June 28 | Wafti uu hogaaminayo Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Md. Cabdiraxman Madaxmad Farole oo ay kamid yihiin Wasiirka Arrimaha gudaha Md.Cabdulahi Axmad Jaamac [Ilkajiir], Wasiirka Qorsheynta xiriirka Caalmiga Farah Dhalac, Wasiiru dowlaha dimuqarraadiyada Cabdi Xasan Jimcaale ayaa booqasho ku yimid dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington 20 June,2009.
Madaxweynaha Puntland iyo Waftiga uu hurkacayey ayaa booqshadoodu la xiriirtey martiqaad ay kaga qayb galayaan kulan uu soo qaban qaabiyey gudoomiyaha guddiga golaha Barlamanka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Mr. Donald M. Payne kaas oo lagaga hadley sidii xal loogu heli lahaa xaalada Somalia.
Madaxweynaha Puntland oo ka hor-hadley guddiga aqalka Wakiilada u qaabislan arrimaha Afrika ayaa halkaas ka jeediyey khudbad ku aadan sidii xal loogu heli lahaa xaalada cakiran ee Somalia gaar ahaan burcad badeedka oo dhibaato ku haysa degaanada hoos yimada MGPL.
Warbixinta golahaan Madaxweyne Farole ka akhriyey aqalka Wakiilada Mareykanka kuwooda u qaabislan tageerada Afrika ayaa waxaa uu hoosta ka xariiqdey mowqifka Puntland ee ku aadan sidii burcad badeedka loola dagaalami lahaa, mowqifkooda ku aadan in la helo dowlad Somaliyed oo ku dhisan nidaamka Fedraalka iyo in dowlada Mareykanka tageero toos ah ka-siiso shacabka Puntland Sidii ay ku heli lahaayeen Mashaariic horumarineed.
Dhinaca kale Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa tan iyo ku sugnaayeen Washington waxaa ay kulamo la qaateen gooni-gooni ah hay?daha dowlagiga ee ka qayb qaata dib u dhiska dalka Somalia sida USAID, World Bank, African Development Faundation, saraakiil ka tirsan Wasaarada arrimaha dibbada Mareykanka iyo kulamo gaar ahoo ay laqaateen xubno ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka.
Madaxweynaha Puntland iyo Waftigiisa ayaa sidoo kale kulamo la qaatey jaaliyada Puntland ee ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaa kuwooda ku nool Washington iyo magaalooyinka aan ka fogeyn.
Jaaliyada Somalida ee ku nool Washington ayaa habeenkii xaley 26 June,2009 u sameeyey Waftiga Madaxweynaha Puntland horkacayey xaflad soo dhoweyn ah taas oo lagu qabtey hoolka Galludet University eek u taal Washington.
Xafaladaan ayaa isugu jirtey warbixino iyo xog waran ayaa dhinaca kale lagu xusey 26 June oo ah markii gobolada Woqooyi Galbeed xornimada ka qaateen Gumeysiga Ingriiska.
Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa ku wajahan maalinimada Axadda ku wajahan magaalada Minnesota halkaas oo ay dagan yihiin shacab aad u farabadan oo kasoo jeeda maamul goboleedka Puntland.
Xafiiska Warfaafinta Madaxweynaha Puntland